श्रद्धाञ्जली सभा – sunpani.com
सुनपानी । १९ पुष २०७७, आईतवार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आइतबार श्रद्धाञ्जली सभा गरेको छ । मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी उपचारकोक्रममा निधन हुनुभएका सरसफाई अधिकृत अशोक केसीको निधनप्रति गहिरो शोक ब्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जलीसभा गरिएको हो ।
श्रद्धाञ्जली सभामा नगरप्रमुख डा. धवलशमशेर राणाले केसीको निधनबाट उपमहानगरपालिकाले ईमान्दार राष्ट्रसेवक कर्मचारी गुमाएको बताउनुभयो । नगरको सरसफाईका लागि स्व. केसी रातदिन खटिने गरेको स्मरण गर्दै नगर प्रमुख राणाले उहाँको निधनबाट सिंगो उपमहानगरपालिका दुःखित भएको बताउनुभयो । श्रद्धाञ्जलीसभामा नगर प्रमुख राणा सहित अधिकांशका आँखामा आँशु देखिथ्यो । श्रद्धाञ्जली सभामा नगर उपप्रमुख उमा थापा मगर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर खड्कालगायत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको उपस्थिति थियो ।
यसैबीच केसीको निधनमा शोक मनाउदै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आइतबार सार्वजनिक विदा दिएको छ । उपमहानगरपालिका र २३ वटै वडा कार्यालयबाट प्रदान हुने अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा बन्द गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।